5 Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap leaves garbage on the sidewalk beside the curb side (Drive HighWay Drain Grating). – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk.
Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating Casting Ductile Iron is designed to be used asacast iron rod. The sieve separates the debris, the dust, the leaf traps, the grates that are embedded in the reinforced concrete canes. So that the water can drain down the side of the footpath. Design and manufacture of products according to the standards of the specifications of the municipality of Bangkok, Department of Public Works and Town Planning. Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand
Casting Ductile Iron Drive Way Curbed Scupper Drainage Grating QuotationQuotation Trash, Trash, Dust, Dirt, Leaves, Side Leaves,
Sidelights, Castings, Ductile Iron, Way Drive, Scrapper, Drainage Grating, Quotation
Size and description Grate trash separator in stone footpaths.
SD11: Curbed Drainage Grates Scupper Trash Trash Drainage Grate Scrapper
Size 10x30cm Mesh 1.50x8cm Thick 1cm W: 1.5kg
Curbed Drainage Grating Scupper Made of sticky cast iron. The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, leaves, paper, stone, box, grate U-shaped sidewalk on the sidewalk, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand
Top Sell # 1 SD12: 10x40cm Rock Trap Trap
Size 10x40cm Mesh 2.50x8cm Thick 1cm W: 1.5kg
The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, leaves, paper, stone, box, grate U-shaped sidewalk on the sidewalk, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand
Top Sell #2SD21: 15x30cm Trash Trap
Size: 15x30cm Mesh 3x10cm Thick 1.50cm W: 1.7kg
Curbed Drainage Grating Scupper The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, leaves, paper, stone, box, grate U-shaped sidewalk on the sidewalk, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand
Top Sell #3SD22: 15x40cm Trash Trap
Size: 15x40cm Mesh 3.3x12cm Thick 1cm W: 2kg
Size 15x50cm. Mesh 3.3×12 cm. Thick 1 cm. Weight 2.4kgSD23: Curbed Drainage Grates Scupper Trash in the side of the
footstone. Size 15x50cm. Mesh 3.3×12 cm. Thick 1 cm. Weight 2.4kg
Size 15x60cm. Mesh 4×14 cm. Thick2cm. Weight 4.2 kgSD24: Curbed Drainage Grates Scupper Grate Scrapper Trash in the sides of the stone
footbed 15x60cm. Mesh 4×14 cm. Thick2cm. Weight 4.2 kg
Made of sticky cast iron. The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, leaves, paper, stone, box, grate U-shaped sidewalk on the sidewalk, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand
Size 15x70cm. Mesh 4×14 cm. Thick2cm. Weight5kgSD25: Curbed Drainage Grates Scupper Grate Scrapper Trash in the stone beside the
footbed. Size 15x70cm. Mesh 4×14 cm. Thick2cm. Weight5kg.
Size 20x57cm. Mesh 3.5×15 cm. Thick2cm. Weight 4.6 kgSD31: Curbed Drainage Grates Scupper Trash in the stone beside the
footbed. Size 20x57cm. Mesh 3.5×15 cm. Thick2cm. Weight 4.6 kg.
Size 25x50cm. Mesh 4×23 cm. Thick2cm. Weight 6.5kgSD41: Curbed Drainage Grates Scupper Grate Scrapper Trash in the stone side
foot slides Size 25x50cm. Mesh 4×23 cm. Thick2cm. Weight 6.5kg
Size 25x70cm. Mesh 4×23 cm. Thick2cm. Weight 8.8kgSD42: Curbed Drainage Grates Scupper Grate Scrapper Trash in the stone side of the
footbed 25x70cm. Mesh 4×23 cm. Thick2cm. Weight 8.8kg
Size 25x90cm. Mesh 4×23 cm. Thick 20 mm. Weight 9.5kgSD43: Curbed Drainage Grates Scupper Grate Scrapper Separated Trash in Foot Stone
Slab 25x90cm. Mesh 4×23 cm. Thick 20 mm. Weight 9.5kg
Size : 180 x 525 x 180 mm. (Wide x Length x Hight) Thick 35 mm.Side Curbed Drainage Driveway Grating
Size: 180 x 525 x 180 mm. (Wide x Length x Hight) Thick 35 mm.
Dust Screen Driveway Grating Trash grate, stone box, grate, grate, weir, sieve, comb, scraps, debris, dust, food particles, scrap paper, According to municipal standards Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads Bangkok
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side road traffic highway
15. FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction FORMWORKS TIES Timber Carpenter Design System: DYWIDAG TIE ROD เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น(ไทร็อด) + WingNut(วิงนัท) + Water Stopper + steel cone / Hole Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Price Suppliers อุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น กำแพงกันดินใช้กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เหล็กยึดแบบ ฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคน นั่งร้านเหล็ก ประกับ โพลีโคนฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highwayDrainage Grates Inlets, Frames and Curb Inlets
ວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating Scupper
ຈັ່ນຈັບ sieve ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ໃບດ້ານຄວບຄຸມຢູ່ແຄມ sidewalk ໄດ້.
ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອທາງດ້ານຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ເປັນທາດເຫຼັກ. ຜ້າຝ້າຍແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ດັກໃບ, ກຼາມທີ່ຖືກຝັງໄວ້ໃນປ່ອງຄອນກີດເສີມ. ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼລົງຕາມແຄມຖະຫນົນ. ການອອກແບບແລະຜະລິດຜະລິດຕະພັນຕາມມາດຕະຖານມາດຕະຖານຂອງນະຄອນຫຼວງຂອງກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ. ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ
ລາຍການຖັງຂະຫຍະ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຝຸ່ນ, ຝຸ່ນ, ໃບ, ໃບຂ້າງ, ຊຸ້ມ, ເຫຼັກ, ທາດເຫຼັກ, ຂັບລົດ, ເຄື່ອງລ້າງ, ລະບົບທໍ່ນ້ໍາ, ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ
Specifications Scouting Grates ຂະຫນາດແລະລາຍລະອຽດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອໃນແກນຕີນ.
SD11: ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ Scrapper ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອໃນແກນຂ້າງ
ຕີນຂອງຂະຫນາດຂະຫນາດ 10x30cm Mesh 1,50x8cm ຫນາ 1cm W: 1.5kg
ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອແກະສະຫຼັກ ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຕິດ ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກຝຸ່ນທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນຫນອງຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ
ຂາຍດີທີ່ສຸດ # 1 SD12: 10x40cm ມ້ວນດັກ ຂຸມຂະຫນາດ 10x40cm Mesh 2.50x8cm ຫນາ 1cm W: 1.5kg
ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກຝຸ່ນທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນຫນອງຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ
Top Sell #2SD21: 15x30cm Trash Trash ຂະຫນາດ: 15x30cm Mesh 3x10cm ຫນາ 1,50cm W: 17kg
ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອແກະສະຫຼັກ ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກຝຸ່ນທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນຫນອງຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ
ຂາຍດີທີ່ສຸດ #3SD22: 15x40cm ຂະ ຫນາດ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຂະຫນາດ: 15x40cm ຕາຫນ່າງ 3.3x12cm ຫນາ 1cm W: 2kg
SD23: ຄວບຄຸມລະບາຍ Grates Scupper ຈັ່ນຈັບ sieve ສິ່ງເສດເຫຼືອກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບການ sidewalk ໄດ້ . 15x50cm ຂະຫນາດຕາຫນ່າງ 3.3×12 ຊົມຫນາ. 1 ຊມ 24 ກົກນ້ໍາຫນັກ..
SD24: ຄວບຄຸມລະບາຍ Grates Scupper ຈັ່ນຈັບ sieve ສິ່ງເສດເຫຼືອກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບການ sidewalk ໄດ້ . 15x60cm ຂະຫນາດຕາຫນ່າງ 4×14 cm ຫນາ.2ຊມນ້ໍາຫນັກ 42 kg..
ຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຕິດ ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກຝຸ່ນທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນຫນອງຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ
SD25: ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ Scupper Grash Scrapper ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຫີນຂ້າງ ຕີນເບກຂະຫນາດ 15×70 ຊມ 4×14 ຊຕມຫນັກ2ຊມຫນັກ5ກົກ.
SD31: ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ Scupper ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນຫີນຂ້າງ ຕີນຂອງຕີນຂະຫນາດ 20x57cm ເມັດ 35×15 ຊຕມຫນາ2ຊມນ້ໍາຫນັກ 46 ກົກ.
SD41: ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ Scrapper ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອໃນຫີນຂ້າງ ຕີນຕີນ 25x50cm ຂະຫນາດ Mx 4×23 ຊມຂະຫນາດ2ຊົມນ້ໍາຫນັກ 6.5 ກົກ
SD42: ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ Scrapper ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອໃນ ຕີນ ຂ້າງ ຕີນຕີນຕີນ 25x70cm ເມັດຂະຫນາດ 4×23 ຊຕມ2ຊມຫນັກ 8.8 ກົກ
SD43: ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ Scrapper ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອໃນດ້ານແກນດ້ວຍ ຕີນຕີນ 25x90cm ຂະຫນາດ Mx 4×23 ຊົມຫນາ 20 ມມຫນັກ 95 ກົກ
Side ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາຖະຫນົນລົດແລ່ນ Grating (ຈັ່ນຈັບ sieve ສິ່ງເສດເຫຼືອການຜະລິດລະລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ) ໄດ້ຂະຫນາດ:. 180 525 ໄດ້ x ການ x 180 mm Breakthrough (The Wide ເພງຄວາມຍາວຂອງ x ທີ່ x Hight): ຫນາ 35 ມມ Breakthrough.
ຂີ້ເຫຍື້ອກະແສໄຟຟ້າ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ອາຫານເຂົ້າ, ເຈ້ຍເສດ, ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ກຸງເທບຯ
The “Shooter ຝົນ” ໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບ ນ້ໍາຝົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປ pavement ລະບາຍນ້ໍາແລະເດັກພື້ນຜິວ. ການເປີດກວ້າງຢ່າງໄວວາ, ການເປີດກວ້າງແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ດ້ານແລະດ້ານເທິງ. ຮູ້ບຸນຄຸນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ:
ພວກເຮົາປະຕິບັດປະເພດທັງຫມົດຂອງຫລັງຄາປັດ ,,, ທໍ່ລະບາຍໃຫມ່ມຸງການ, ປັດ overflow A, ເປັນ retrofit ປັດ ,, ເດັກ, ລະບຽງ, Deck ປັດ, ປັດຊັ້ນກັບຫລັງຄາ, ເດັກ, ອຸປະກອນເສີມສະກຸນເງິນແລະເປັນທີ່ Scupper ປັດທົດແທນ Universal ເທິງຫລັງຄາ, ເດັກ, ພາກສ່ວນເຄື່ອງມື. ວິທີການ້ໍາຂອງພວກເຮົາປະກອບມີທັງນ້ໍາດື່ມທີ່ມີການຄ້າແລະອາໃສຢູ່. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຂີ້ຝຸ່ນຫຼືໂງ່ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ຫຼືການກໍ່ສ້າງ, ພວກເຮົາມີສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ວິທີການຂະຫນາດທໍ່ໄຫຼ.ການວາງສະແດງແລະທາງເລືອກໃນການລະບາຍນ້ໍາໃນທາງດ່ວນແມ່ນບັນຫາສໍາລັບນັກຂັບຂີ່. gullies Highway – pits ການລະບາຍການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮູ້ບຸນຄຸນໂລຫະເປີດຢູ່ໃນຂອບຖະຫນົນຫົນທາງໄດ້ – ມີຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍໃນການຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ລົດ. ກ່ຽວກັບທະເລໃນການເຄົ້າໄຮເວຮູ້ບຸນຄຸນໂລຫະຂອງ gullies ໄດ້ດໍາເນີນການໃນອັນດຽວກັນຫລືຄ້າຍຄືກັນ, ທິດທາງຂອງລົດຖີບເມື່ອຍແທນທີ່ຈະກ່ວາ perpendicular; ຄູ່ກັບສະຖານລະຫວ່າງຕະແກງໄດ້ກາຍຂອບເຂດຄວາມກວ້າງຢາງລົດຖີບທົ່ວໄປ, ບໍ່ມີຢູ່ອາດຈະສູງຂອງຢາງຈັບແກງໃນຂະນະທີ່ transversing gullies ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບ່ອນນັ່ງຢູ່ທົ່ວໄປຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນບ່າໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກວ້າງຂອງໄຫລ່ທີ່ປະສິດທິຜົນ. ອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະແກງລະບາຍກ່ຽວກັບທາງດ່ວນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍອັນຕະລາຍທີ່ທຸກຍາກຫມາຍ: ຈໍານວນຫນ້ອຍໄດ້ມີປ້າຍທີ່ມີອາການເຕືອນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຫມາຍສີໄດ້ມັກຈະ worn ຮ້າຍແຮງ. Scuppers – ການເປີດບັນດາສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານຊີມັງເພື່ອຫລຸດນ້ໍາ – ແມ່ນພົບຢູ່ຕາມທາງດ່ວນແລະບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ນັກແລ່ນຂີ່ຈັກກະວານ; ການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນການຂັບຂີ່ທາງດ່ວນຄວນເປັນມາດຕະຖານເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າສະພາບຖະຫນົນແລະລະບຽບການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້. ບ່ອນທີ່ scuppers ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, drains “Bike ປອດໄພ” ແມ່ນການທົດແທນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຕອບສະຫນອງລະບຽບການທາງດ່ວນ.
ການນໍາໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະແກນ. ຖະຫນົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕາມລະບົບລະບາຍນ້ໍາທາງຫລວງ
ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກຝຸ່ນທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນຫນອງຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນຮູບ U ຢູ່ທາງຂ້າງ. ຜະລິດແລະອອກແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ETA Trench ຈໍລະບາຍຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນ grating ໃກ້ Footbath, trapper ໃບ scupper ຄວາມປອດໄພຕະແກງຈະລາຈອນລະບາຍຕາມຂ້າງຂອງທາງດ່ວນ.
ເມື່ອຝົນຕົກ, ນໍ້າໄຫຼອອກຈາກຖະຫນົນຫົນທາງ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຫລັງຄາເຮືອນແລະຫນ້າດິນອື່ນໆ, ເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ການປະຕິບັດງານນີ້ສາມາດຖືກກໍານົດວ່າເປັນໄພນໍ້າຖ້ວມ. ສາຍນ້ໍາໄຫຼລົງສາມາດເຂົ້າໄປທາງນ້ໍາຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍທໍ່ໃຕ້ດິນຫຼືເປັນພື້ນທີ່ແລ່ນອອກໄປ. ເຂດຕົວເມືອງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີນ້ໍາປະປາທີ່ມີຈຸດເຂົ້າສູ່ລະບົບນໍ້າຖ້ວມ. ໃນບາງເຂດຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງຊົນນະບົດ, ອາດຈະບໍ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງນ້ໍາແລະນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອຜ່ານທໍ່ນ້ໍາ.
ພວກເຮົາປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໃນແງ່ຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແລະໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດແລະຈໍານວນຂອງການ runoff ທີ່ຄາດວ່າຈະມີ. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອອອກແບບນ້ໍາແລະທໍ່ເພື່ອນໍານ້ໍາໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ, ເຫດການກ່ຽວກັບຝົນຕົກອາດຈະຮ້າຍແຮງແລະເກີນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບນໍ້າຖ້ວມຂອງພວກເຮົາ.
ນ້ໍາຮົ້ວຂ້າງ, ຫຼືທໍ່ນ້ໍາ, ສະຫນອງການລະບາຍນ້ໍາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ paved ເຊັ່ນ: sidewalk ແລະບ່ອນຈອດລົດ lots. ໃນເວລາທີ່ຖະຫນົນຫົນທາງແລ່ນໄປຄຽງຄູ່ກັບອາຄານກໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະບາຍນ້ໍາແບບເລິກເຊິ່ງເພື່ອສະແດງຄວາມເສຍຫາຍຈາກມຸງຫລັງຈາກການຫຼຸດລົງຈາກການກໍ່ສ້າງໃນເວລາທີ່ຍອມຮັບແຜ່ນທີ່ໄຫຼອອກຈາກຖະຫນົນ. ນ້ໍາຮ່ອງຮອຍແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ພ້ອມກັບເກີບດູດຝຸ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີເສັ້ນທາງຍ່າງຕີນດີແລະມີນ້ໍາປະປາທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາສະຫນອງນ້ໍາສຽງໂຫວດທັງຫມົດທີ່ມີນ້ໍາມັນເຫຼື້ອມໃສດ້ວຍການອອກແບບຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະການອອກກໍາລັງກາຍແບບ pedestrian. ຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ມີຮູບແບບທີ່ທົນທານຕໍ່ການລະເມີດສູນກາງຖືກສະຫນອງໃຫ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເວັບໄຊທ໌ໃດຫນຶ່ງ. ປະຕູຮົ້ວ Sidewalk ສາມາດມີການຈະລາຈອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ປອດໄພສໍາລັບ pedestrian ໃນຫຼາຍຂະຫນາດ.
GFRP Composite ແມ່ນ Steel ຂອງ Gully Scupper, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ , Culvert ການ Conduit Trench ,, ບາຍນ້ໍາ Ditch ນີ້, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດພ້ອມ, ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole ກ່ຽວກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກວມເອົາຈັບ A ອ່າງ, ຍົກຂຶ້ນມາເຂົ້າໄດ້ໃຊ້ຊັ້ນທາງຍ່າງ, ຕີນ, ພາທະນາຍຄວາມແມ່ນຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ຍຶດໄດ້ Clip Table Saddle Lock ທີ່ສໍາຄັນ Clamp ດັດ Fastenal ໄດ້ Anchor ກ່ຽວກັບ Fastener ລັອກແຜ່ນຕິດຕັ້ງ. ປີ້ງກະດານ, formwork ຜູກ Rod ເປັນຂຸຍ WaterStopper Anchorage Wingnut , ເດັກຫລວງ ductile ເຫລໍກທໍ່ຊິນເສັ້ນໃຍຫລວງ, lid ປິດຖັງຂອງ Holger Hansen ໂຮນດິ້ງ, ຫລວງທໍ່ cover ການກັ່ນຕອງຫນອງຂ້າເຊື້ອ, ຫລວງ. ການລະບາຍນ້ໍາ Bile, ແຜ່ນປູ Cap ໄດ້ຕະຫຼອດ – ມຸມສາກ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced, ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາລັບການປິ່ນປົວຂອງການເກັບກໍານ້ໍາເສຍປະໄວ້ເພື່ອຕັດທັນທີ; ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ເຫຼັກ grill lid ການເຂົ້າເຖິງຕົວ, ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້, ແຄມ, ດັງ, eyebrow ຄວາມຜິດພາດພຽງກະດານໄດປົກຫຸ້ມດັ່ງກ່າວ.
ວັດສະດຸຜະ Aluminum, F. RP, corrosion ທົນ rust, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ອາຊິດ, ເປັນດ່າງ, ສານເຄມີ, ພະລັງງານການປະຫຍັດ, ບໍ່ມີອາການບວມ, ປອດສານພິດຫນ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, Pantip. siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, ສາມາດພິເສດກົມສະຖິຕິ mch, SCG ໂຮມໂປ Depot Watsadu, repairing ເຮືອນ, ອຸປະກອນ, ການເຄືອບພື້ນຜິວ, epoxy, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, epoxy ຊັ້ນ. ໂພລີຍູລີເທນ, ກາວ PVC, ຊີວະພາບຊີວະພາບ, PE PU, ເຄືອບ, ແຂໍງແຂງ, ການປັບປຸງພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກໍາ ໂຮງແຮມເຮືອນຄົວ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ການສ້ອມແປງ, crack ປະທັບຕາ, ການເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ເຫຼັກອຸປະກອນການທົດແທນ. , ປອມ, ສັງເຄາະ, ປອດສານພິດ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, Fla drains ເທິງຫລັງຄາ, ດ້ານການປ້ອງກັນພັຍ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນແບນມື້ຄ່ໍາຊັ້ນ, ພື້ນຢາງປະມານເຄື່ອງ podium ໄດ້, trays pallet ໄດ້. ຕາຕະລາງ, ຊັ້ນ ແມ່ທ້ອງ block ປູຫຍ້າອອກແບບ. Yankee bar, ລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງທາງຕີນ, Yat, Yarage, ມີລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ສາຍນ້ໍາເຫຼັກທຽນ, ບີບປາຍ, ເສັ້ນໄຍຄາບອນ, slope slippery, railing, mini net, ຕັນກິ່ນ, ຖະຫນົນຫົນທາງ, decorate ຫນອງປາ, ພູມສັນຖານ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນເຮືອນ, ປັບປຸງ feng shui, DIY ການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ, ຊື້ຢູ່ Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ແລວເສດຖະກິດ, ຫ້ອງນ້ໍາຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກກໍ່ສ້າງໃຫມ່, ໃນຫມູ່ຄະນະກໍາແພງ curtain, ເພດານ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຜົນປະໂຫຍດ awnings ຕົກແຕ່ງຜ້າມ່ານ slatted cedar pergola Fiat hinges breeze, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffles ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. Delight, polycarbonate, vinyl, block ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ລະບຽງ staircase ຂະຫນາດແຜ່ນ stencil. ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ Polycarbonate vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການຫ້ອງນ້ໍ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ Polycarbonate vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການຫ້ອງນ້ໍ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ
GFRP Composite ເພັດ Top Manhole ປົກ Checker Plate ພື້ນຜິວ (ຫນາ grill lid ປິດຂີ້ເຫຍື້ອການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ນ້ໍ Fiber Glass Mat) www.chancon.co.th. ໄຂ່ Polystyrene ສີຂາວສໍາລັບການກັບຄືນອາກາດແລະການລະບາຍ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ກຸ້ງ, ກົບ, salamanders ອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ກຸ້ງ, ກົບ, salamanders ອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ກຸ້ງ, ກົບ, salamanders vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ກຸ້ງ, ກົບ, salamanders vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander.
ກ່ອງພາດສະຕິກ ABS ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານຂະຫນາດ 25cm ແລະ 30cm ມີສອງຊັ້ນທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ຈະເລືອກເອົານ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະຜ່ານຄົນ. ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລົ່ມ. ອ້ອມຂ້າງສະລອຍນ້ໍາ ພື້ນທີ່ໂດຍບໍ່ມີລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານທໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ.
3. Hotdip Galvanized (HDG) Iron Metal Steel Grating. ຮ້ອນຊ້ວນ galvanized ເຫລໍກຮ້ອນ galvanized ແຜ່ນເຫຼັກ. ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2, ຫຸ່ນຍົນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກຫຼາຍກ່ວາການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍມືແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ HDG. ປະໂຫຍດແມ່ນວ່າມັນແຂງແຮງກວ່າວັດສະດຸທັງຫມົດ. ຂໍ້ເສຍປຽບແມ່ນການຂີ້ເຫຍື້ອ. ແລະລັກຂະຫນາດ 25x100cm. ແລະ 30x100cm.
4. FRP, Fiberglass Grill / Mold grating ເສັ້ນໃຍຮູ້ບຸນຄຸນແກ້ວ, reinforced ຊິນ.“ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ FRP” ແທນເຕົາລີດ / ສະແຕນເລດເຫຼັກ ຜະລິດດ້ວຍເສັ້ນໃຍຢາງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ທົນທານຕໍ່ UV, ແສງແດດບໍ່ແຕກ, ກາວຫຼືອາກາດ. Thief ບໍ່ຕ້ອງການ ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍດາຍ ຊີວິດຂອງ 50-100 ປີແມ່ນເປັນເອກະສານທາງເລືອກໃຫມ່. ເລືອກສີທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ 1.5x4M ສໍາລັບພື້ນເຮືອນ. Designed for use as ໃສ່ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຕົວແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ດັກໃບ, ແກນຂ້າງຕາມເສັ້ນທາງທາງຫລວງ. ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ຖະຫນົນຊົນນະບົດແລະບາງກອກ. 6. Cast ພ້ອມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ທໍ່ ductile Manhole ກວມເອົາການປົກຫຸ້ມຂອງ.
10. FRP, Stair Tread ດັງປົກຂັ້ນຕອນຕົວຢ່າງ Protector ປົກຂອບດັງແຜງ cover ໃຍແກ້ວຄວາມຜິດພາດພຽງ ladder. ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ Fiberglass, ປົກຫຸ້ມຂອງ fiberglass, ແຂນດັງ, eyebrow, ຝາຄອບ staircase ອອກແບບເພື່ອທົດແທນ ພື້ນຢາງ playgrounds ອອກກໍາລັງກາຍ, ສວນສາທາ, ໂຮງຮຽນ, gyms, ທັງກາງແຈ້ງແລະໃນລົ່ມ
11 hdg / Stainless Steel Grating Anchor ອຸປະກອນ ທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener ອຸປະກອນລັອກຄລິບແນ່ນອນດ້ານເຫຼັກແຜ່ນ sieve, ເຫລັກສະແຕນເລດ /. ເຫລໍກສະແຕນເລດທີ່ມີຊີມມ້ວນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສະຕິກເກັດສະແຕນເລດທີ່ໃຊ້ໃນການຍຶດເອົາເສັ້ນໃຍສັງກະສີຫຼືແຜ່ນສະແຕນເລດ. ແກນເຫລໍກສ່ວນປະກອບ zinc plated ແຕ່ລະແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜ່ນແກນເພື່ອພື້ນຖານດ້ານລຸ່ມ. ລະດັບສາມາດປັບໄດ້. ທັງສອງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກຂະຫນາດຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດຂອງຕາຫນ່າງແລະຂະຫນາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 12. ຂອບ Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate Frame ປະມານພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.
FRP Manhole Cover Grating (New Made for Fiber Optic) ອອກແບບເພື່ອທົດແທນແຜ່ນປົກແຜ່ນເຫຼັກ. Bo ຕົ້ນສະບັບສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກສະບັບພາສາການປົກຫຸ້ມຂອງ
14 ເພດານເຕົາບາບີ Trellis ຮມົ່: ຜ້າມ່ານ Panel slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ. Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາບອດ Panels Wall Panels, Partition Screen ທົ່ວໄປສີ
15. Formwork / ກ່ຽວກັບແບບຟອມ Tie ເປັນອຸປະກອນເສີມ, ລະບົບ ສໍາລັບ Reinforced SLAB ຊັ້ນມັງ Wall ໃຊ້ອາຄານອື່ນ ໆ ກໍ່ສ້າງຫລໍ່ຂອງ TIES ໄມ້ໃນ Carpenter Design- ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້: Dywidag ລູກຫມາກຂອງເຫຼັກ ROD ກັບກະທູ້ຕະຫຼອດເສັ້ນ (rod ວັດ) ໄດ້ + Wingnut (ປີກຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ) + ນ້ໍາຕໍາແຫນ່ງ + ໂກນເຫຼັກ. / Hole ເວັ້ນພື້ນທີ່ຕົວ Fiberglass FormTies / Scaffolding ລາຄາ ຊັບພາຍເອີ ປະເພດວົງເລັບໄມ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ. ມັນສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການປະຕິບັດທັງຫມົດຂອງໂລຫະປະສົມ, ເຊັ່ນ: ກໍາແພງສີຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະກອບດ້ວຍຄອນກີດ reinforced, formite, nain, joints ນ້ໍາ, ແກນ hex, ໂກນຫນວດ, ພາກຮຽນ spring clamp ພາກຮຽນ spring, clamp wedge, ໂກນດອກຢາງພາລາ, ໂຄງປະກອບການເຫຼັກກ້າທີ່ມີ polycarbonate
ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ETA, Trench, ອ່າງ Scupper, ຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນ, ການຈະລາຈອນຖະຫນົນລົດແລ່ນ Side ບາຍນ້ໍາ Grating ເດີນທາງ Highway Road, ການຈະລາຈອນໃບລ່າປອດໄພ Scupper ບາຍນ້ໍາໄດ້ເດີນທາງຕະແກງ, ຄຽງຄູ່ຂ້າງຄຽງຂອງທາງດ່ວນ
, ລະບາຍເຫມາະສໍາຫລັບ Inlets ສຸດ, ກອບຮູບເປັນແລະ Curb Inlets ສຸດ
, ແກງບາຍນ້ໍາ, ກໍາລັງການອອກແບບມາເພື່ອຮັບນ້ໍາແລະສາມາດເປັນຮູບຮ່າງໄດ້ຕະຫຼອດ, Square. ຫລືເພີ່ມ Rectangular ມັນ JobsDB.com ຂາຍໂດຍປົກກະຕິມີ A ກອບ, Curb Inlet ກອບອະນຸສາວລີ Box, ຂົວ, ທໍ່ລະບາຍ, ຫຼືຕື່ມຕະຫຼາດ: ບາງໂທອອກ slotted ປົກເຫຼົ່ານີ້…
ການເຂົ້າເຖິງການປົກຫຸ້ມຂອງ, ຈັບແລະກອບຮູບເປັນ | ເວີ້ງໄດ້ STORM ແລະ Sewers.
ຜະລິດຕະພັນຂອງໄທຜະລິດແລະມີຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງຫຼີ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ. ຖະຫນົນຂີ້ເຫຍື້ອແລະການກໍ່ສ້າງເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານ ASTM ແລະ AASHTO. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫລໍ່ຂອງພວກເຮົາຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດ DOT ຂອງລັດຖະບານກາງແລະລັດ; ແລະເມືອງອື່ນໆ, ມາດຕະຖານເມືອງຫຼືທ້ອງຖິ່ນ. ການທົບທວນຄືນຂອງລູກຄ້າໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ຮູບຮ່າງ, ຂະຫນາດ, ການຄາດຄະເນການໂຫຼດ, ປະເພດວັດຖຸ, ທາງເລືອກເລືອກແລະປະເພດລັອກ. ກອບຮູບແບບ Manhole ແລະຄອບຄຸມສາມາດເປັນຮູບກົມ, ສີ່ຫລ່ຽມຫລືສີ່ຫລ່ຽມ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນປົກກະຕິທີ່ມີຢູ່ເປັນສະພາແຫ່ງຫນຶ່ງຫຼືກໍານົດໂດຍອີງຕາມການປະຊຸມກັນກ່ອນທີ່ຈະຈັດສົ່ງ.
ທາງເລືອກ “Dump ບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອ! Drains To Waterways “ແລະການຂຽນແບບຂຽນແບບອື່ນໆທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການຫລໍ່ເຫລັກຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຖືກຂາຍຕາມປົກກະຕິ, ມີກອບ, ກ່ອງເຂົ້າ, ກ່ອງເກັບມ້ຽນ, ຫຼືຂົວຂົວ. ບາງຕະຫຼາດທີ່ເອີ້ນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງຜ້າ. ການກໍານົດການແກ້ໄຂລະບາຍນ້ໍາທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຖ້ວມ. ຂບວນກ້ວາງຂອງຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍຕະແກງ ditch , ຕະແກງທໍ່, ຄວບຄຸມແລະ gutter ເວີ້ງແລະຈັບ basins.Grating ໄທມີການແກ້ໄຂລະບາຍນ້ໍໃຫ້ພໍດີກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຈາກເຂດ pedestrian ກັບ ramps loading ສະຫນາມບິນຂະຫຍາຍອອກໄດ້ແລະມີຢູ່ໃນ width ຈໍານວນຫລາຍ. ຕາຕະລາງການອອກແບບອາດຈະເປັນການປັບປຸງສະຖາປັດຕະຍະສະເພາະ, ຫຼືສາມາດທຽບກັບການອອກແບບຂອບ granules. Bridge Drain Scupper | Storm Drain Inlets
ສະຫນອງການແກ້ໄຂລະບາຍນ້ໍາທີ່ດີເລີດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂົວ. ລະບົບການເກັບນ້ໍາໄດ້ເກັບນ້ໍາຈາກພື້ນດິນຂອງຂົວເພື່ອສົ່ງນ້ໍານີ້ໄປສູ່ຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ຂົວ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການກໍ່ສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ອ່າງເກັບນ້ໍາ (ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຝົນ, ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ)
ແມ່ນເຂົ້າສູ່ລະບົບລະບາຍນ້ໍາທີ່ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບມີການປ້ອນເຂົ້າຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີນ້ໍາຝົນລົງເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ໍາແລະຮົ້ວເພື່ອເກັບຝົນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະສິ່ງກີດກັ້ນອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນ້ໍາປະປາເພື່ອເກັບລວບລວມນ້ໍາຖ້ວມແລະແກ້ໄຂບາງຢ່າງແຂງແຮງ. ການດູດເອົານ້ໍາປະຕິບັດເປັນ pretreatment ສໍາລັບການປະຕິບັດການປິ່ນປົວອື່ນໆໂດຍການ captures ຂະຫນາດໃຫຍ່ sediment nts. ການປະຕິບັດຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາໃນການຖອນຝຸ່ນແລະສິ່ງກີດກັ້ນອື່ນໆແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາ (ເຊັ່ນ: ຂະຫນາດຂອງທໍ່) ແລະການບໍາລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິເພື່ອຮັກສາການເກັບຮັກສາທີ່ມີຢູ່ໃນອ່າງເກັບນໍ້າເພື່ອເກັບຝົນ. Catch basins
ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບທໍ່ນ້ໍາທົ່ວປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອ່າງເກັບນໍ້າຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການດູດຊຶມແລະມົນລະພິດ. ການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາແມ່ນການປະຕິບັດກ່ອນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຝົນຕົກອີກ. ການປັບປຸງທໍ່ນ້ໍາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນອາດຊ່ວຍປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. A ທາງເລືອກທີ່ຕິດງ່າຍດາຍຂອງຈັບອ່າງນໍ້າແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງຫມົດຈັບອ່າງມີ outlet ຄຸມດ້ວຍຜ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນ floatable ເຊັ່ນກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອແລະ debris, ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ theຫມໍເດັກ.
ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອປະຕູຂື້ນຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຊຶມເສົ້າທີ່ຢູ່ຕິດກັນຢູ່ໃນຂີ້ເຫຍື້ອສໍາລັບການລະບາຍນ້ໍາປະສິດທິຜົນ. ອັດຕາການສະກັດກັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍາວໃນການຫຼຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຊຶມເສົ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະບໍ່ປອດໄພສໍາລັບການໄຫລວຽນຂອງການຈະລາຈອນແລະການປະຕິບັດງານຈັກກະວານຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສາຍຂີ້ເຫຍື້ອ. ເພາະສະນັ້ນ, ການປະນີປະນອມແມ່ນຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງໃນເວລາທີ່ການເລືອກເອົາມູນຄ່າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊຶມເສົ້າ gutter. ຄວາມເລິກຂອງການຊຶມເສົ້າໃນຂີ້ກະເທີ່
ບາງເມືອງໃນສະຖາບັນຕ້ອງການທີ່ຈະລຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີຄວາມຊຶມເສົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງດ້ວຍການໄຫລຂອງການຈະລາຈອນ. ປະລິມານການດູດຊືມໄດ້ຖືກບັນຈຸລົງມາຈາກເສັ້ນຂອງຂົວແລະຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງນັ້ນການຊຶມເສົ້າບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມເສັ້ນຂີ້ເຫຍື້ອ. ນີ້ອາດຈະປັບປຸງການຂັບລົດ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂັດຂວາງການຂັດຂວາງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະລາຈອນ. ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ສະດວກສະບາຍແມ່ນມີປະໂຫຍດໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີແລະສະຖານະການຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດທໍາຄວາມສະອາດຕົວເອງແລະປະສິດທິຜົນຂອງໄຮໂດຼລິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນມັກມັກໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອເພາະວ່າທໍ່ໃສ່ຢູ່ນອກທາງເດີນທາງແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກແລະລົດຈັກ.
ຈຸດອ່ອນຂອງການເປີດກ່ອງແມ່ນວ່າການໄຫຼຂອງການເປີດແມ່ນມີການສ້ອມແຊມແລະບໍ່ສາມາດດັດແປງໄດ້ງ່າຍໃນການປ່ຽນແປງລະດັບຖະຫນົນໃນຂະນະທີ່ມັນເກີດຂື້ນໃນຊັ້ນເທິງ. Overlays ສົບຜົນສໍາເລັດສາມາດຫຼຸດລົງຫຼືແມ້ກະທັ້ງກໍາຈັດການເປີດຕົ້ນສະບັບສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍອອກນ້ໍາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຂອບແຄມຖະຫນົນໄດ້ຖືກຫລຸດລົງໄປຕາມເສັ້ນທໍາອິດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ.
ສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ສຸດ, ເວີ້ງກະຕັນຍູໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ sag ໃນ gutters, ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບສິ່ງກີດຂວາງການຈະລາຈອນດິນເປຕັງຫລື rails (ບ່ອນເວີ້ງຄວບຄຸມຈະບໍ່ປະຕິບັດ), gutters V ເປັນຮູບທີ່ມີບໍ່ຄວບຄຸມຫລືອຸປະສັກ, ແລະ ditches. ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ເຕົາແກຣນຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະສົມປະສານກັບລະບາຍນ້ໍາ. ປ່ອງຢ້ຽມຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດປັບຕົວກັບລັກສະນະທາງຖະຫນົນໃນຕົວເມືອງເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟ, ທາງແຍກຕາມຖະຫນົນແລະທາງກາງ. ໃນເວລາທີ່ເຕົ້າສລຸບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນກໍານົດ, ການຕັ້ງຄ່າແລະການປະຖົມນິເທດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງລົດຖີບແລະລໍ້ເຫຼື່ອນ.
ການເຂົ້າເຖິງລະບົບລະບາຍນ້ໍາໂດຍຜ່ານທໍ່ເຂົ້າຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນດີເລີດໃນນັ້ນ, ຕາມປົກກະຕິ, ເຕົາອົບແມ່ນສາມາດຖອດໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການບໍາລຸງຮັກສາຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດເປັນບັນຫາຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຊີວິດຂອງໂຮງງານ; ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເກັບກໍາຂໍ້ debris ເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາໃຈໃນສິ່ງທີ່ຄົງທີ່ຂອງການດູແລເອົາໃຈໃສ່. ເມື່ອມີຝຸ່ນຂີ້ເຖົ່າແຫ້ງ, ມັນກໍ່ສະກັດກັ້ນການໄຫຼເຂົ້າຂອງນ້ໍາ. ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອຍັງນໍາສະເຫນີ interference ທີ່ມີທ່າແຮງກັບລົດຖີບແລະລໍ້ເຫຼື່ອນ. Linear Drains
ນ້ໍາເລິກຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການລະບາດຂອງການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສະພາບການໄຫຼຕໍ່າ. ການປະຍຸກໃຊ້ປະກອບມີການໄຫຼວຽນຂອງແຜ່ນເຈ້ຍຈາກຖະຫນົນຫົນທາງໃນເວລາທີ່ການເກັບກໍາຢູ່ໃນຈຸດສຸມແມ່ນບໍ່ປະຕິບັດ, ຫຼືການໃຫ້ປະໂຫຍດສໍາລັບການໄຫລຂອງ stagnate ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ. ນ້ໍາລຽບມີປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ມີຊຶມເສົ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະສິດທິພາບໄຮໂດຼລິກ. ນໍ້າຖ້ວມໄລຍະຍາວອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນເຂດທີ່ມີບັນຫາທີ່ມີບ່ອນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນ: ຕາມເສັ້ນທາງກາງແລະໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສູງ. ສາມາດຕິດຕັ້ງສາຍນ້ໍາແບບລຽບຕາມທາງຂວາງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສາຍນ້ໍາແບບລຽບໆມີຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼາຍ: ອ່າງລຽບໆມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສູງທີ່ຈະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນການຕັ້ງຄ່າ sag. ການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອທໍາຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກລະບາຍນ້ໍາເຂົ້າ. ການຕິດຕັ້ງສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
slotted drains ທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ດ້ວຍ Slot extended-, corrugated, ຫຼືເພີ່ມຄໍ, ຢູ່ດ້ານເທິງ (ໂດຍເບິ່ງເບິ່ງຮູບສະແດງທີ 10-5). ຮູທະວານຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາເຂົ້າແມ່ນເປັນປົກກະຕິເສີມເພື່ອຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. Slotted Drain Inlet ນ້ໍາສະອາດຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍຄວາມຄ້ອຍໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຄວາມໄວທໍາຄວາມສະອາດສໍາລັບການສອກ. ຖ້າບໍ່, ການທໍາຄວາມສະອາດແລະການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນລະບາຍນ້ໍາ. ທໍາຄວາມສະອາດຫ້ອງອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນຕ້ອງການຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາປະປາເພື່ອໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາແລະທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິ. Trench Drains
ທໍ່ນ້ໍາຈືດອາດຈະຖືກ precast ຫຼື cast-in-place. ຮູບທີ 10-6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮ່າງກາຍຂອງທໍ່ນ້ໍາຝົນທາງຫນ້າ. Precast drainage trench ທໍ່ລະບາຍນ້ໍມີປະໂຫຍດຂອງຕື້ນ ຄວາມເລິກໄປຕິດແລະເປັນ invert ກ້ຽງສຸດທີ່ບໍ່ຮັກສາຕະກອນ, ແຕ່ດ້ອຍໂອກາດຂອງການມີປະລິມານທີ່ຈໍາກັດເນື່ອງຈາກວ່າຂະຫນາດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ທໍ່ລະບາຍນ້ໍກ່ຽວກັບພະແນກ roadways ຖືກກໍານົດໃຫ້ ມີຕະແກງບໍ່ແມ່ນເອົາອອກເພາະວ່າແກງເອົາອອກໄດ້ອາດຈະມາວ່າງຫຼືຍ້າຍທີ່ຈະສ້າງອັນຕະລາຍການຈະລາຈອນໄດ້. ຕະແກງທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍກະຊວງມີ ຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງຊ່ອງເປີດ 60% ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ມີລົດດູດຝຸ່ນຫລືລົດນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການຖອນແກງໄດ້. Combination Inlets
ລະບົບປະສົມປະສານລວມເຊັ່ນການຄວບຄຸມແລະຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍໆຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ. ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈໍາ, ການປະສົມປະສານມີການໄຫຼລົງຖ້າຫາກມີສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອເກີດຂື້ນຫຼືຖືກລະເບີດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນໂດຍ debris. ການບໍາລຸງຮັກສາທໍ່ປະສົມປະສານແມ່ນມັກຈະສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຕົາອົບແມ່ນສາມາດຖອດອອກໄດ້, ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ໍາແລະລະບົບນໍ້າຖ້ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລະບົບປະສົມປະສານທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຊັ້ນຮຽນໂດຍປົກກະຕິບໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຍ້ອນວ່າມີຄວາມສາມາດເພີ່ມຂື້ນຕື່ມອີກ. ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການປະສົມດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງປັດໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການກໍານົດຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການນໍາເຂົ້າປະສົມປະສານ. ສໍາລັບການຄວບຄຸມການປະສົມປະສານແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ສົມມຸດວ່າຄວາມສາມາດຂອງປະສົມປະສານລວມປະກອບດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງຂົວແລະຄວາມຍາວຂອງການເປີດກວ້າງຂື້ນ. ຂັດຂວາງຄວາມສາມາດຂອງການເປີດປິດກັ້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບການເປີດທໍ່.
ເຂົ້າໃນການຕັ້ງຄ່າ sag ແມ່ນພິຈາລະນາ “ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງສາຍ” ເນື່ອງຈາກນ້ໍາແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງມັນບໍ່ມີບ່ອນອື່ນທີ່ຈະໄປ. ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຂົ້າໃນການຕັ້ງຄ່າ sag ມັກຈະເປັນການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບລະບາຍລົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ອອກແບບໄຮດໍລິກຕ້ອງພິຈາລະນາບາງລາຍການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ຫນອງສະລັບສັບຊ້ອນແລະວິທີການທາງດ້ານຊອຍສະລັບສັບຊ້ອນ. ໃນການຕັ້ງຄ່າ sag, ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມການຄວບຄຸມລະດັບກາງເປັນຫນຶ່ງໃນສອງຕົ້ນກໍາເນີດ. ການເຂົ້າໄປໃນຕົວເອງອາດເຮັດໃຫ້ຫົວທີ່ແປເປັນຄວາມກວ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກແລະການໄຫຼເຂົ້າໃນຂົວແລະຂີ້ເຫຍື້ອຈາກແຕ່ລະທິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂອງຕົນເອງ. ຖ້າ sag ຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງທາງຂວາງ, ເປີ້ນພູທີ່ຢາດແມ່ນສູນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຸດຄົ້ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມີຮູບແບບການໄຫລຂອງສາມມິຕິທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດລົງ. ເປັນການສົມທຽບ, ວິທີຫນຶ່ງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນການສົມມຸດຄວາມຍາວຂອງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເຄິ່ງກາງ. ເນື່ອງຈາກວ່ານ້ໍາຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງມັນບໍ່ສາມາດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ຄວນໃສ່ລະຫັດຄວາມປອດໄພທີ່ເຫມາະສົມກັບການໃສ່ຂະຫນາດ. ສໍາລັບທໍ່ກະປ໋ອງໃນຖົງ, ປັດໃຈຄວາມປອດໄພປົກກະຕິແມ່ນປະມານສອງ; ສໍາລັບທໍ່ລະບາຍຄວັນ, ປັດໃຈອາດຈະນ້ອຍລົງ. ໃນການນໍາໃຊ້, ປັດໄຈທີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບທໍ່ສົ່ງທໍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນປັດໄຈຄວາມປອດໄພ, ຫຼືປັດໄຈທີ່ກີດຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, ປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງ2ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປັດໄຈທີ່ກີດກັ້ນຂອງ 50% ເຊິ່ງຄາດວ່າເຕົາເຜີ້ງແມ່ນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂັດຂີ້ເຫຍື້ອ. ບ່ອນທີ່ນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນສາມາດເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໃນຜ່ານກ້ອງແລະໃນ curve sag, ຕັ້ງ, ປະຕິບັດວິສະວະກໍາທີ່ດີແມ່ນການຈັດວາງເວີ້ງ flanking ທັງສອງຂ້າງໃຫ້ inlet ສະຖານທີ່ sag ເພື່ອບັນເທົາອາຫຼືບາງທີ່ສຸດຂອງພາລະໄຫຼໃນ inlet ໃນ sag ໄດ້.
ການ Median / ນີ້ Ditch Drains
Drains ຫຼືຕື່ມເວີ້ງ, ແຕ່ປະກົດອອກໃນ ditch ແລະປານກາງມີປົກກະຕິແລ້ວ inlets, ຮູ້ບຸນຄຸນ, ແລະກໍາລັງເອີ້ນວ່ານອກຈາກນີ້, “ການຫຼຸດລົງເວີ້ງ ,. ” The The ປະຕິບັດງານຂອງການປັບປຸງ, ໂດຍ Inlet ແມ່ນວ່າ A Forms Concrete riprap ປະເພດ Collar A ໂຖປັດສະວະຂອງອ້ອມຂ້າງ Inlet. ເລື້ອຍຄັ້ງ, ເຊັ່ນການເຂົ້າມາໃນການຕັ້ງຄ່າ sag (sump) ສ້າງຂື້ນໂດຍຕັນຂີ້ເຫຍື້ອ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພະແນກ (0-5823-1) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕັນຂີ້ເຫຍື້ອ6ຊັງຕີແມັດອາດຈະບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂອງໄຫຼຢ່າງສົມບູນ; ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອສູງອາດຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງກໍານົດຄວາມເລິກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເກັບກໍາສົມບູນ, ຫຼືບັນຊີສໍາລັບການໄຫຼໃນໄລຍະຕັນຂີ້ເຫຍື້ອໃນການເຂົ້າມາຕໍ່ໄປ. ການດູແລຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເປີ້ນພູຂີ້ເຫຍື້ອມີມາດຕະຖານມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນ. Drainage Chutes
chutes ບາຍນ້ໍາ, ຍັງເອີ້ນວ່າທໍ່ລະບາຍໃນໄລຍະຂ້າງຄຽງຫຼືຄວບຄຸມສະລັອດຕິງ, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຢູ່ສົ້ນຂອງຂົວທີ່ຈະບໍ່ວ່າຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຫຼຈາກແລ່ນໃສ່ສຽງຂົວ, ຫຼືເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼຈາກແລ່ນອອກສຽງຂົວໃສ່ pavement ໄດ້. ອາດຈະມີສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ເປັນ chute ບາຍຫລືຕັດການຄວບຄຸມອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຖອນການໄຫຼຈາກ pavement ທີ່ບໍ່ມີລະບົບລະບາຍປົກຄອງແມ່ນປະຈຸບັນແລະທີ່ outfall ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນປະຈຸບັນທາງຫລັງຂອງການຄວບຄຸມແລະ gutter ສ່ວນ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ການເປີດກວ້າງຂອງການຄວບຄຸມຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊ່ອງທາງທີ່ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຫຼືການຫຼຸດລົງທີ່ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງທໍ່ຫຼືຄວາມຊັນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຊ່ອງທາງຫຼືຊ່ອງຫຼຸດລົງອາດຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍທໍ່ທີ່ຢູ່ໃນຖະຫນົນທີ່ຂື້ນດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃນຮູບທີ 10-8. ການປິ່ນປົວນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການບໍາລຸງຮັກສາອື່ນໆ, ແຕ່ຍັງແນະນໍາຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຕົນເອງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງ.
ສະຖານທີ່ ,, Inlet
ໄດ້ Inlet ທີ່ຢູ່ອາດຈະໄດ້ຮັບບໍ່ວ່າຈະໂດຍຖະຫນົນ, dictated ອົງປະກອບຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການບົບໄຮໂດຼລິກ, ທັງສອງຫຼືຕື່ມ. ເວີ້ງຄວນໄດ້ຖືກບັນຈຸນ້ໍາຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຖະຫນົນ ເຊັ່ນ sags, ແຍກຖະຫນົນເກາະ gore (ເບິ່ງຮູບສະແດງທີ 10-9), ຕຣາການປ່ຽນແປງສູງ Super, driveways, ຂ້າມຍ່າງ, ແລະຢັບຢັ້ງ ramps (ເບິ່ງວິທີ Bypass Flow ການອອກແບບ). ໄຫຼຂ້າມທາງແຍກ, ramps, ແລະ ໃນລະດັບຫນ້ອຍ, driveways, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍການຈະລາຈອນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼທົ່ວຍ່າງຂ້າມແລະ ramps ຄວບຄຸມອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັນຕະລາຍຄົນຍ່າງຕີນ. ທົ່ງຫຍ້າໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເກັບກໍາ 100% ຂອງການໄຫຼ. ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຄວນຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນໄຮດໍລິກເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼເຂົ້າໄປໃນອ່າງນໍ້າແລະການລ້ຽງຫນອງຫຼາຍເກີນໄປ.
ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາເກັບນ້ໍາຈາກເສັ້ນທາງແລະບ່ອນຈອດລົດແລະສົ່ງມັນໄປສູ່ລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ໍາໃຕ້ດິນ. ລະບົບລະບາຍນ້ໍາປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະລະບົບທໍ່ນ້ໍາຖືກເອີ້ນວ່າທໍ່ລະບາຍ. ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄຸນນະພາບນ້ໍາຫນ້ອຍດຽວ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເຂດທົ່ງພຽງທີ່ພັດທະນາ, ພວກມັນມັກຈະເປັນອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນຂອງລະບົບການລະບາຍນ້ໍາເປັນທັງຫມົດມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ໍາ. ມີອົງປະກອບການອອກແບບທີ່ສາມາດນໍາເຂົ້າເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍນ້ໍາເພື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ໍາບາງຢ່າງ.
ປະສິດທິພາບທໍ່ລະບາຍນ້ໍ າສາມາດເຫມາະສົມຕາມຖະຫນົນຫິມະ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີລະບົບລະບາຍນ້ໍາປົກກະຕິທີ່ກໍາລັງຕິດຕັ້ງຫຼືວາງແຜນໄວ້. ລ່ອງລະບາຍນ້ໍາປະສິດທິພາບ
ປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຕົກລົງຈາກຂີ້ຝຸ່ນຕາມຖະຫນົນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການໄຫຼອອກຈາກ culverts / curbs ໂດຍການທໍາລາຍພະລັງງານ.
တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper
ဆန်ခါထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။
(ကျဇယားသံ Casting) ကျဇယားသွန်းသံအထူးစွန့်ပစ်ထားဆန်ခါထောင်ချောက်ဆန်ခါ traffic အဝေးပြေးဘေးထွက် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းတုတ်ကျင်းမျက်နှာပြင်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အဲဒီမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးအတွက် embedded သောဆန်ခါ, ကွန်ကရစ်-အားဖြည့်ကွန်ကရစ်အရွက်။ ဒါကြောင့်ရေ footpath တလျှောက်တွင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆင်းတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းနှင့်ပြည်သူ့လုပ်ငန်း၏မြို့တော်ဘန်ကောက်ဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း၏စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန်။ ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA
ကိုးကား, အမှိုက်သရိုက်ထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့် sieve အဆိုပါလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဘက်အရွက်
ကျဇယားသံ Drive ကို Way ကိုထိန်းချုပ်ရန် Scupper သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Casting ခြစ်စျေးနှုန်း။
တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper Specification
SD11: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 10x30cm 1.50x8cm mesh ထူထပ်သော 1cm ။ ။ ဒဗလျူ။ 1.5kg ။
ဘေးထွက်တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘက်အသွားအလာလမ်းလမ်းမကြီး။
တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ သွန်းသံကနေဖန်ဆင်းတော်ကျဇယား Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA
# 1 အကောင်းဆုံးထိပ်တန်းဝယ်ဖို့ SD12 ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်သတ်ထားခြင်းကိုအရွယ်အစား 10x40cm
အဆိုပါအရွယ်အစား 10x40cm, 2.50x8cm .: ထူထပ်သော 1cm mesh အဆိုပါ W: ။ ။ 1.5Kg ။
Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA
2 အကောင်းဆုံးထိပ်တန်းဝယ်ဖို့ SD21 ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်သတ်ထားခြင်းကိုအရွယ်အစား 15x30cm
အဆိုပါအရွယ်အစား 15x30cm, 3x10cm .: ထူထပ်သော 1.50cm mesh အဆိုပါ W: ။ ။ 1.7kg ။
တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA
3 အကောင်းဆုံးထိပ်တန်းဝယ်ဖို့ SD22 ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်သတ်ထားခြင်းကိုအရွယ်အစား 15x40cm
အဆိုပါအရွယ်အစား 15x40cm, 3.3x12cm .: ထူထပ်သော 1cm mesh အဆိုပါ W: ။ ။ 2kg ။
SD23: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 15x50cm 3.3×12 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။ 1 စင်တီမီတာအလေးချိန် 2.4kg ။ ။
SD24: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 15x60cm 4×14 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။2စင်တီမီတာအလေးချိန် 4.2 ကီလိုဂရမ်။ ။
သွန်းသံကနေဖန်ဆင်းတော်ကျဇယား Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA
SD25: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 15x70cm 4×14 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။2စင်တီမီတာအလေးချိန်5ကီလိုဂရမ်။ ။
SD31: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 20x57cm 3.5×15 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။2စင်တီမီတာအလေးချိန် 4.6 ကီလိုဂရမ်။ ။
SD41: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 25x50cm 4×23 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။2စင်တီမီတာအလေးချိန် 6.5kg ။ ။
SD42: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 25x70cm 4×23 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။2စင်တီမီတာအလေးချိန် 8.8kg ။ ။
SD43: အလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်
Size ကို 25x90cm 4×23 စင်တီမီတာကွက်ထူထပ်သော။ ။ 20 မီလီမီတာအလေးချိန် 9.5kg ။ ။
ဘေးထွက်တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းသည့်ကားလမ်းခြစ် (ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်မျိုးဆက်မိုးသည်းထန်စွာအရည်ပျော်)
ဟာအရွယ်အစား: 180 525 x ကို x ကို 180 မီလီမီတာအောင်မြင်မှုများ (အဆိုပါတစ်ခွင်ဂီတအလျား x ကို x ကိုမြင့်): ။ ထူထပ်သော 35 မီလီမီတာအောင်မြင်မှုများ။
ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်ရေရေကာတာဆန်ခါဖုန်မှုန့်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းကတော့ footpath ၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်အပျက်အစီး floating ဖုန်မှုန့်, အပျက်အစီးများ, အရွက်, စက္ကူ, ကျောက်ရထားလမ်းကားများ trapping, အထီးကျန်သည့်ကင်ကင်ဖြီးတားဆီးရန်။ မြူနီစီပယ်၏စံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန ဘန်ကောက်
ဘေးထွက်တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဟာလမ်းဘေးအပေါ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအပေါ်သည့်ကားလမ်းခြစ်တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်ဘက်အသွားအလာလမ်းလမ်းမကြီးဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်။
အဆိုပါ “မိုးသေနတ်သမား” အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါသည် ရေနုတ်မြောင်းခင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ယိုစီးရေထဲသို့ဝင်တော်မူကြောင်းကိုမိုးရေ။ လျင်မြန်စွာယိုစီးမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, ဖွင့်ချထားပါသည် ခြမ်းနှင့်ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင်များပေါ်မှာ။ အထူးကုရဲ့ဆန်ခါ:
အဆိုပါ ,, Re-ရေနုတ်မြောင်းခေါင်မိုး drains လျှံစီးတစ်ဦးက drains တစ် retrofit အဆိုပါ ,, ယိုစီးမှု, လသာဆောင် drains အတွက်ကျနော်တို့မိုးအားလုံးသည်အမျိုးအစားများယူသွား, အလှဆင် drains အတွက်, ကြမ်းပြင်ရန်, ခေါင်မိုး, ယိုစီးမှု, ဆက်စပ်ပစ္စည်းငွေကြေးနှင့်အမျှကောင်းပြီအမျှ Scupper အစားထိုး Universal ခေါင်မိုး, ယိုစီးမှု, တူရိယာအစိတ်အပိုင်းများ drains drains ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယိုစီးမှုဖြေရှင်းနည်းများစီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည် ရေနုတ်မြောင်း။ သင်တို့အဘို့အိမ်ခေါင်မိုးသို့မဟုတ်ကုန်းပတ်ရေနုတ်မြောင်းလိုအပ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်ကဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ပြုပြင်အလုပ်, ငါတို့သည်သင်တို့လိုရှိသည်။ ဘယ်လိုအရွယ်အစားယိုစီးပိုက်ရန်။
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရေနုတ်မြောင်း၏နေရာချထားခြင်းနှင့်ရှေးခယျြမှုနှစ်ဦးစလုံးစက်ဘီးစီးများအတွက်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးပြေး gullies – လမ်းရဲ့အစွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဆန်ခါပွင့်လင်းသတ္တုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရေနုတ်မြောင်းတွင်း – စက်ဘီးစီး ” ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှမူလတန်းစိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်။ က Sky အဝေးပြေး, တူညီတဲ့အတွက် run အဆိုပါ gullies ၏သတ္တုဆန်ခါ, ဒါမှမဟုတ်အလားတူ, အစား perpendicular ထက်စက်ဘီးတာယာ၏ဦးတည်ချက်မှပင်လယ်ပြင်တွင်; ဘုံစက်ဘီးတာယာအကျယ်ကျော်လွန်ဆန်ခါအကြားအကွာနှင့်အတူတွဲခြင်း, gullies transversing နေစဉ်ခြစ်ဖမ်းတာယာ၏မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင်ပခုံးမှာသူတို့ရဲ့ဘုံနေရာချထားသည့်ထိရောက်သောပခုံးအကျယ်တစ်လျှော့ချရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရေနုတ်မြောင်းခြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များ marking ဆင်းရဲသားကိုအန္တရာယ်တိုးနေကြသည်: ဆေးသုတ်အမှတ်အသားများကိုမကြာခဏပြင်းပြင်းထန်ထန်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့စဉ်အနည်းငယ်, သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ Scuppers – ရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖို့ကွန်ကရစ်အတားအဆီးအတွက်အဖွင့် – အဖြစ်ကောင်းစွာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ရှိရခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးရန်မခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိကြ၏ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး gullies ကျော်သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလမ်းအခြေအနေနှင့်စည်းမျဉ်းများကို၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်မပြုပါဘူးဘယ်မှာမှတစ်ပါးစံဖြစ်သင့်သည်။ scuppers အသုံးပြု. မရပါဘယ်မှာ, “ဆိုင်ကယ်ကို Safe” ရေနုတ်မြောင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသောသင့်လျော်တဲ့အစားထိုးဖြစ်ကြသည်။
application များကိုထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်ထောင်ချောက်မွမှေုနျ့နှငျ့အမှိုက်သရိုက် sieve ။ ဘေးထွက်အဝေးပြေး သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဖုံးခြစ်စနစ်တစ်လျှောက် specification လမ်းဘေး။
Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ ဘေးထွက်သံလမ်းတလျှောက် footpath မြှို့နယ်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများ။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာနအမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် footbath အနီးရှိဆန်ခါ ETA တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်တွင်ယာဉ်ကြောခြစ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။
ဝါကျ, ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း, အဖြေလမ်းမကြီးမျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို မှစ. တည်ရှိပြီး ons, stormwater ဖမ်းရန်တစ်ဦးက Channel ကို
မိုးသလားတဲ့အခါမှာကောင်တာ, ရေအနီးဆုံးရေလမ်းထဲသို့, ကာပက်, လမ်းတွေ မှစ. အဆိုပါအိမ်များပြီးတော့တပတ်ရစ်အခြားမျက်နှာပြင်၏ခေါင်မိုးဟာ Off အလုပ်လုပ်စေပြီး။ ဤသည်မှာ Run-ချွတ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် stormwater ။ Stormwater Run-ပယ်ကနေတဆင့်ရေလမ်းရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ် ပိုက်တစ်ခွဲမျက်နှာပြင် network သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင် Run-ချွတ်အဖြစ်။ အများစုမှာမြို့ပြဒေသများတွင်ရေနုတ်မြောင်းတဲ့စနစ်ကရှိ stormwater ယိုပိုက်မှ entry ကိုအချက်များနှင့်အတူ။ အထူးသဖြင့်ကျေးလက်မြို့ရွာတို့၌အချို့သောမြို့ပြဒေသများရှိ မျှသောအစိတ်အပိုင်းသာလျှင်ပိုက်အခြေခံအဆောက်အအုံရှိနိုင်ပြီး stormwater ပွင့်လင်းရေကျင်းများမှတဆင့်ညှစ်နေသည်။
ကျနော်တို့ predicated ပြင်းထန်မှုနဲ့ကြာချိန်နှင့်မျှော်လင့်ထားနိုင်မျောပါခြင်းမှာပမာဏ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထိုကဲ့သို့သောမိုးရေချိန်ဖြစ်ရပ်များ, များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ကျနော်တို့အနီးဆုံးသင့်လျော်သောရေလမ်းမှရေကိုညွှန်ကြားဖို့ရေနုတ်မြောင်းနှင့်ပိုက်ဒီဇိုင်းဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ အခြိနျမှနျမှမိုးရေချိန်ဖြစ်ရပ်များအတော်လေးပြင်းထန်ဖြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ stormwater စနစ်များ၏ရရှိနိုင်စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်။
လမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်း, ဒါမှမဟုတ်တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောလမ်းဘေးစင်္ကြံနှင့်ယာဉ်ရပ်နားစာရေးအဖြစ်ခင်းဒေသများရှိ linear ရေနုတ်မြောင်းပေး။ လမ်းဘေးစင်္ကြံတစ်အဆောက်အဦးနှင့်အတူကို run တဲ့အခါ, linear ရေနုတ်မြောင်းကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ထံမှစာရွက်စီးဆင်းမှုကိုလက်ခံနေစဉ်ကွာအဆောက်အဦးကနေ downspouts ကနေအိမ်ခေါင်မိုးမျောပါခြင်းမှာသိရှိစေရန်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ လမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းကောင်းကောင်းညှစ်လူကူးမျက်နှာပြင်များနှင့်ထိရောက်သော downspout ရေနုတ်မြောင်းကိုသေချာစေရန် downspout ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အတူအသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်ခြင်းနှင့်လူသွားလူဘေးကင်းလုံခြုံဆန်ခါဒီဇိုင်းများနှင့်အတူသံလမ်းဘေးရေနုတ်မြောင်းကိုနှင်ထုတ်ကိုဆက်ကပ်။ ဗဟို-သော့ခတ်ခိုးယူခံနိုင်ရည်မော်ဒယ်အပါအဝင်အကွိမျမြားစှာ frame ကိုရှေးခယျြစရာ site ကိုတိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ လမ်းဘေးမြောင်းအသင်းတော်များအသွားအလာ rated အဖြစ်အစိမ်းရောင်အခြေခံအဆောက်အအုံကနေရပ်နားတွေအများကြီးရေနုတ်မြောင်းအထိ application များအတွက်စံပြအများအပြားအရွယ်အစားအတွက်လူကူးလုံခြုံခြစ်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
Form ကိုတွဲချည်ပေါ် 15. FORMWORKS / ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ထိုစနစ်ဖြစ်ပါတယ် Dywidag မျဉ်းတစ်လျှောက်လုံးချည်နဲ့လှံတံကိုသံမဏိ၏လည်စည်း (လည်စည်းလှံတံကို) + WingNut (တောင်ပံခွံမာသီး) + ရေအဆို့ + သံမဏိကန်တော့ချွန်: စစ်ကူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသည်အမှတ်တရအသုံးပြုကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်ဟာ System လက်သမား Design- အပေါ်သစ်အသုံးပြုဆက်ဆံမှုများ၏အဆောက်အအုံအခြားဆောက်လုပ်ရေး FORMWORKS ။ / Hole Spacing ဖန်မျှင်ထည် FormTies / ငြမ်းစျေးနှုန်း ပေးသွင်း bracket ကအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်နှင့်အတူရိုးကိုဆက်ထိန်းထားအဖြစ်အမျိုးမျိုး၏ formwork နှင့်အတူသုံးနိုငျကြီးမားသောသံမဏိကျောက်ဆူးပုံစံပြိုင်ပွဲ Tyne, Wing အခွံမာသီးများပါဝင်ပါသည်, အဆစ်, ရေ, အခွံမာသီး, ဤလှိုင်းတံပိုးရှိသော counterpart, သော့ခလောက်, သော့ခလောက်ခြောက်, အဆစ်တွေ့ဆုံရန်။ ရူ့, အမြစ်, နွေဦးညှပ်, သပ်ညှပ်, polypropylene ကန်တော့ချွန်နဲ့သံမဏိ girder ၏ပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်း။
Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်း, ဝှမ်း Scupper, ဖုန်မျက်နှာပြင်, သည့်ကားလမ်းဘေးထွက် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးခရီးသွား, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်ကို Safe Scupper သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းအသွားအလာအဝေးပြေး၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်ခြစ်သွားရောက်ကာဖို့
, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းအပေါ်ဝင်ပေါက်ကိုင်တွယ်တစ်ခုဘောင်ခတ်ပြီးတော့အပေါ်ဝင်ပေါက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်
သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်, ရေ Accept လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပတ်ပတ်လည်, Square ကို Be နိုင်သလား။ ။ ။ ။ ဒါမှမဟုတ် Rectangular Add ဒါဟာ JobsDB.com ပုံမှန်အားဖြင့်, တစ်ဦးက Frame ကအတူရောင်းချခဲ့ဝင်ပေါက် Frame ကတားဆီးရန်, Box ကိုမော်ကွန်းတိုင်, တံတား, ယိုစီးမှု, ဒါမှမဟုတ် Add သည်စျေးကွက်များ: တချို့ကခေါ်ဆိုနေတဲ့အဲဒီအဖုံး slotted
အဆိုပါ Access ကို, မျက်နှာဖုံးများကိုင်တွယ်ပြီးတော့တစ်ဘောင်ခတ် | ဝင်ပေါက်မုန်တိုင်း & ရဆေိုး။
ထိုင်းဆန်ခါကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း သွန်းသံယိုစီးတံတား scuppers ။ တံတားမှလမ်းပေါ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး Cast scupper ASTM နှင့် AASHTO စံတွေ့ဆုံရန်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Cast ဖက်ဒရယ်နှင့်တွေ့ဆုံရန် ပြည်နယ် DOT သတ်မှတ်ချက်များ; နှင့်အခြားခရိုင်, မြို့သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ ။ ဖောက်သည်ရွေးချယ်မှုပုံမှန်အားအသွင်သဏ္ဌာန်, အပေါ်အခြေခံထားတယ် အရွယ်အစား, ဝန် rating, ပစ္စည်းအမျိုးအစား, ရွေးချယ်မှုများကောက်နှင့်သော့ခတ်အမျိုးအစား။
Manhole ဘောင်များနှင့်အဖုံးများ, ပတ်ပတ်လည်ရှိနိုင်ပါသည် စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံ။ သူတို့ကစည်းဝေးပွဲသို့မဟုတ်အဖြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ် တင်ပို့မတိုင်မီစုဝေးရှိမရှိအပေါ်မူတည်ထား။
optional “အဘယ်သူမျှမစွန့်ပစ်ကိုပစ်သိမ်းရန်! Waterways ရန်ရေနုတ်မြောင်း “နှင့်အခြားထုံးစံကိုနှင်ထုတ် နှစ်ဆပိုများလာစာလုံးကိုဒေသခံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစပျိုးကူညီပံ့ပိုးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေနုတ်မြောင်း Cast သို့မဟုတ်ခြစ်ပုံမှန်အားနှင့်အတူရောင်းချ တဲ့ဘောင်, ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်ဘောင်, အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး box ကို, ဒါမှမဟုတ်တံတားယိုစီးမှု။ တချို့ကစျေးကွက်သည်ဤ slotted အဖုံးကိုခေါ်ပါ။ သင့်လျော်သောရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ခြင်းတစ်ခုကအရေးကြီးတယ် တဲ့မုန်တိုင်းရေစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်း။ ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းမြောင်းခြစ်လည်းပါဝင်သည် , ပိုက်ဆန်ခါ, ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်မြောင်းဝင်ပေါက်နှင့် basins.Grating ထိုင်းတိုးချဲ့နှင့်မြောက်မြားစွာ width အတွက်ရရှိနိုင်လေဆိပ်တင်ရိုးမှလူကူးဒေသများမှသင်၏လျှောက်လွှာကို fit ဖို့ကတုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်ဖမ်း။ ဒီဇိုင်နာတုတ်ကျင်းခြစ်ဗိသုကာတိုးမြှင့်မှုများ standalone စေခြင်းငှါ , ဒါမှမဟုတ်သစ်ပင်ဆန်ခါဒီဇိုင်းများကိုက်ညီအတူလိုက်ပါနိုင်ပါ။
တံတားယိုစီးမှု Scupper | မုန်တိုင်းယိုစီးမှုဝင်ပေါက်တံတား application များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေနုတ်မြောင်းဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ် ။ အဆိုပါ scupper စနစ်များတံတားကုန်းပတ်ကနေရေကိုစုဆောင်း တံတားအောက်ရာထူးသငျ့လျြောဖို့ဤရေသိရှိစေရန်မျက်နှာပြင်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ scuppers အပေါ်သော့ချက်အားသာချက်က၎င်း၏ဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပါးဆောက်လုပ်ရေး။
တစ်ဦးကဖမ်းအင်တုံ (မုန်တိုင်းယိုစီးမှုဝင်ပေါက်, ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်) ။မုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်တစ်ရပ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်အား stormwater အဆိုပါဖမ်းအင်တုံနှင့်အနည်အနှစ်များ, အပျက်အစီးများနှင့်ဆက်စပ်နေသောညစ်ညမ်းဖမ်းယူဖို့ sump ဝင်တဲ့ဆန်ခါသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်ပါဝင်သော။ သူတို့ကအစပေါင်းစပ်ရဆေိုးရေဝေရေအတွက်အသုံးပြုကြသည် floatables ဖမ်းယူခြင်းနှင့်အချို့စိုင်အခဲအခြေချရန်။ ဖမ်းအင်တုံသည်အခြားကုသမှုများအတွက် pretreatment အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးမားသော sedime nts ဖမ်းယူခြင်းဖြင့်အလေ့အကျင့်။ အနည်အနှစ်များကိုမဖယ်ရှားမှာဖမ်းအင်တုံ၏စွမ်းဆောင်ရည် နှင့်အခြားညစ်ညမ်းထိုဖမ်းအင်တုံ (ဥပမာ, အ sump ၏အရွယ်အစား) ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အနည်အနှစ်များကိုဖမ်းယူဖို့ sump အတွက်ရရှိနိုင်သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဖမ်းအင်တုံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးရေနုတ်မြောင်းစနစ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်များစွာသောဖမ်းအင်တုံအနည်အနှစ်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဖမ်းဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်။ ဖမ်းအင်တုံ၏စံပြ application ကိုအခြား stormwater စီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ pretreatment ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ တည်ဆဲဖမ်းအင်တုံ Retrofitting သိသိသာသာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ကူညီလိမ့်မည်။ ဖမ်းအင်တုံ၏ရိုးရှင်း retrofit option ကိုအားလုံးဖမ်းအင်တုံကြိမ်မြောက်အီးမုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်ကဝင်ရောက်ရာမှထိုကဲ့သို့သောအမှိုက်နှင့်အပျက်အစီးအစအနအဖြစ် floatable ပစ္စည်းများ, တားဆီးဖို့ hood ကိုထွက်ပေါက်ရှိသည်သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
အများစုမှာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖွင့်လှစ်ဝင်ပေါက်ထိရောက်သောစီးဆင်းမှုကြားဖြတ်များအတွက်မြောင်းတစ်ခုကပ်လျက်စိတ်ကျရောဂါအပေါ်သို့အကြီးအကျယ်မူတည်။ သာ. ကွီးမွတျကြားဖြတ်နှုန်းထားများပိုမိုတိုတောင်းဝင်ပေါက်အရှည်မှု။ သို့သော်ကြီးမားသောမြောင်းစိတ်ကျရောဂါဟာမြောင်းလိုင်းအနီးယာဉ်ကြောစီးဆင်းမှုနှင့်စက်ဘီးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမြောင်းစိတ်ကျရောဂါများအတွက်သင့်လျော်တဲ့တနျဖိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည့်အခါထိုကွောငျ့, တစ်ဦးအပေးအယူနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမြောင်းစိတ်ကျရောဂါ၏အတိမ်အနက်ကို
ပြည်နယ်အတွင်းရှိတချို့သူများကမြူနီစီပယ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက် minimize လုပ်ဖို့သိသိသာသာစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှကြိုက်တတ်တဲ့။ အဆိုပါဝင်ပေါက်ကတော့ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဟာမြောင်းလိုင်းကျော်လွန်တိုးချဲ့တော်မမူကြောင်းဤကဲ့သို့သောမြောင်း၏ line ကနေ recessed ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် driveability တိုးတက်စေမည်အကြောင်း, သို့သော်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအကူးအပြောင်းအသွားအလာရန်အန္တရာယ်ရှိုးလိမ့်မည်။ ဖွင့်လှစ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ Self-စင်ကြယ်စေအရည်အချင်းများနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ထိရောက်မှု၏ SAG နှင့် On-တန်းအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်တားဆီးရန်။ ထို့အပြင်သူတို့မကြာခဏဝင်ပေါက်ခရီးသွားလမ်းအပြင်ဘက်နေရာချသောကြောင့်ဆန်ခါဝင်ပေါက်ကျော်ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းတွေဆီကနှင့်စက်ဘီးအသွားအလာဖို့အန္တရာယ်များလျော့နည်းဖြစ်စေနေကြသည်။
ဝင်ပေါက်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း၏အားနည်းချက်မျက်နှာပြင်ကုသမှုထပ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်များ၏ flowline ပြောင်းလဲနေတဲ့ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်အဆင့်ဆင့်မှအလွယ်တကူချက်နဲ့ပုံသေမဟုတ်, ဖြစ်ပါတယ်။ အဆက်ဆက်သည်ထပ်တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသို့မဟုတ်ပင်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်အစွန်းမူရင်းမြောင်းလိုင်းမှ tapered ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, ရေဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်မရရှိနိုင်ပါကမူလဖွင့်လှစ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဆန်ခါဝင်ပေါက်ကွန်ကရစ်အသွားအလာအတားအဆီးသို့မဟုတ်သံလမ်းကပ်လျက်ရေကျင်းထဲမှာ SAG configurations (ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်မှာ), V-shaped ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အတားအဆီးမျှနှင့်အတူရေကျင်းများနှင့်မြောင်းအတွင်းအသုံးပြုကြသည်။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်နှင့်အတူပေါင်းစပ် On-တန်းအခြေအနေများမှာလည်းအသုံးပြုကြသည်နိုင်ပါသည်။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့သည့်ကားလမ်း, လမ်းလမ်းဆုံနှင့်ပျမ်းမျှအဖြစ်မြို့ပြလမျးခရီး features တွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်သောအခါ, ဆန်ခါ Configuration နဲ့တိမ်းညွတ်စက်ဘီးနဲ့ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သင့်သည်။
တစ်ကနေတဆင့်မုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ် Access ကို ဆန်ခါဝင်ပေါက်များသောအားဖြင့်, ထိုဆန်ခါဖြုတ်ဖြစ်ပါသည်, ထိုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆန်ခါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝင်ပေါက်စက်ရုံ၏ဘဝအသက်တာကာလအတွင်းတစ်ဦးဆက်လက်ပြဿနာနိုင်ပါတယ်; အပျက်အစီးများကိုစုဆောင်းဖို့ propensity ဆန်ခါ inlets စေသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်အရာဝတ္ထု။ ထိုကဲ့သို့သောအပျက်အစီးများကြောင့်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့စုဆောင်း သည့်ဝင်ပေါက်သို့ရေမျက်နှာပြင်၏။ ဆန်ခါဝင်ပေါက်ကိုလည်းစက်ဘီးနှင့်အတူအလားအလာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုတင်ပြ ခြင်းနှင့်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်က။
linear ရေနုတ်မြောင်းကျယ်ပြန့်ပြန့်နှံ့နိမ့်စီးဆင်းမှုအခြေအနေများ၏ကြားဖြတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုအမှတ်မှာစုစည်းလက်တွေ့ကျတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ဆင်ခြေလျှောခြင်းမရှိဘဲပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရပ်တန်စီးဆင်းမှုတွေအတွက်ယေဘူယျဝင်ပေါက်ပေးသည့်အခါလျှောက်ထားမှုလမျးခရီးကနေကြားဖြတ်ယူစာရွက်စီးဆင်းမှုများပါဝင်သည်။ linear ရေနုတ်မြောင်းအဘယ်သူမျှမစိတ်ကျရောဂါဟိုက်ဒရောလစ်ထိရောက်မှုတို့အတွက်လိုအပ်သောကြောင်းအားသာချက်ရှိသည်။ linear ရေနုတ်မြောင်းထိုကဲ့သို့သောပျမ်းမျှအတားအဆီးတစ်လျှောက်နှင့်စူပါမြင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာအဖြစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်ဆန်ခါဝင်ပေါက်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်ဘယ်မှာပြဿနာဒေသများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ linear ရေနုတ်မြောင်းကိုလည်းလမျးခရီးကိုဖြတ်ပြီး transversely installed နိုင်ပါသည်။ သို့သော် linear ရေနုတ်မြောင်းများစွာကိုအားနည်းချက်များရှိသည်: Linear ရေနုတ်မြောင်း SAG configurations အတွက်အပျက်အစီးစုဆောင်းဖို့မြင့်မားသော propensity ရှိသည်။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆိုပါယိုစီးမှုဝင်ပေါက်ကျော်ထံမှအပျက်အစီးများကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ installation ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
သည့် (ကိုတွေ့မြင်ကြည့်ရှုပုံ 10-5 အားဖြင့်), တစ် extended- ပေါက်နှင့်အတူတစ်ပိုက်ထားရှိရေးမြှောင်းပုံ, ဒါမှမဟုတ်ထိပ်တန်းမှာလည်ချောင်း Add slotted ရေနုတ်မြောင်း။ တစ်ဦး slot ယိုစီးမှုဝင်ပေါက်၏လည်ချောင်းဖြစ်ပါတယ် သာမန်အခြေခံအဆောက်အသမာဓိရှိဘို့အားဖြည့်။ slot ဝင်ပေါက်ယိုစီးမှု။ Slotted ရေနုတ်မြောင်းလုံလောက်သောဆင်ခြေလျှောနှင့်အတူ install လုပ်ထားရပါမည် သည့်မြှောင်းပုံများအတွက်သန့်ရှင်းရေးအလျင်ပေး။ မထားလျှင်, ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရမယ် ကဒ်အထိုင်ယိုစီးမှုအပေါ်စီစဉ်ထားခြင်းရှိလော့။ access ကိုသေတ္တာများထွက် clean များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံးလိုအပ်နေပါသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်သန့်ရှင်းရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တစ်ဦးချင်းစီ slot ယိုစီးမှုပြေး၏ဝေးဆုံးကို။
ကတုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်း precast သို့မဟုတ် cast- ဖြစ်နိုင်သည် In-ရာအရပျ။ ပုံ 10-6 ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆန်ခါသရုပ်ဖော် တခု installed precast တုတ်ကျင်းမြောင်း။ Precast တုတ်ကျင်းမြောင်း။ ကတုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းတဲ့တိမ်၏အားသာချက်ရှိတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရွယ်အစား embed နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အနည်ထိန်းသိမ်းထားပါဘူးတစ်ခုအလွန်ချောမွေ့ထိန်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်အသံအတိုးအကျယ်ရှိခြင်း၏အားနည်းချက်။ ဦးစီးဌာနလမျးပျေါမှာကတုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းရန်လိုအပ်သည် ဖြုတ်ခြစ်ချောင်လာတစ်ခုသို့မဟုတ်အသွားအလာအန္တရာယ်ဖန်တီးတံ့သောရွှေ့စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့် Non-ဖြုတ်ခြစ်ရှိသည်။ ဦးစီးဌာနတို့ကသတ်မှတ်ထားသောဆန်ခါတစ်ခုရှိ ဆန်ခါဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲလေဟာနယ်ထရပ်ကားသို့မဟုတ်ရေထရပ်ကားတွေနဲ့သန့်ရှင်းရေးဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ 60% ပွင့်လင်းအာကာသနိမ့်ဆုံး။
ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်ဆန်ခါအဖြစ်ပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်အများအပြား configurations, အထူးသဖြင့် SAG နေရာအသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဝင်ပေါက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးဝဖြစ်လာသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာအပျက်အစီးများအားဖြင့်ပိတျဆို့နတေဲ့လျှင်သောကြောင့် sags အတွက်မွေးရာပါအပျက်အစီးများပြဿနာ, ပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုလျတ်ယိုစီးမှုပေးထားပါတယ်။ ပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်၏ကို Maintenance ပုံမှန်အားဖြင့်ဝင်ပေါက်များနှင့်ဆက်စပ်မုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်လွယ်ကူစွာများကိုဆန်ခါဖြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်။ On-grade ကိုအသုံးပြုသောပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သောကြောင့်ရရှိသည့်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အပိုဆောင်းဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းရည်၏ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမရှိကြပေ။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်အပေါ်စစ်မှန်သော data တွေကိုပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်၏စစ်မှန်တဲ့စွမ်းရည်အဆုံးအဖြတ်များအတွက်တိကျသောအချက်များတည်ထောင်ရန်မလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်ဆန်ခါအဘို့အ ,. ပေါင်းစပ်ဝင်ပေါက်၏စွမ်းရည်ဆန်ခါ၏စွမ်းရည်နှင့်အထက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖွင့်လှစ်အရှည်၏ပေါင်းလဒ်ပါဝင်သည်ယူဆ။ ဆန်ခါဖွင့်လှစ်ရန်ကပ်လျက်ကြောင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖွင့်ပွဲများ၏စွမ်းရည်လျစ်လျူရှုပါ။
SAG configuration အတွက်ဝင်ပေါက်
ရေကိုနှင့်၎င်း၏အပျက်အစီးများဝန်သွားကြဖို့အဘယ်သူမျှမကအခြားနေရာရှိသည်ကြောင့် SAG ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုဝင်ပေါက်မှာ “လိုင်း၏အဆုံး” စဉ်းစားသည်။ ထိုကြောင့်တစ်ဦး SAG ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုဝင်ပေါက်၏ပျက်ကွက်မကြာခဏမုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်၏အောင်မြင်သောစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုခြိမ်းခြောက်မှုကိုယ်စားပြုတယ်။ ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်နာထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးကန် width နဲ့ရှုပ်ထွေးချဉ်းကပ်တောင်စောင်းကဲ့သို့အချို့အပိုဆောင်းပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည်။ တစ်ဦး SAG ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံထဲမှာ, ထိန်းချုပ်ကန်အကျယ်နှစ်ခုဇစ်မြစ်များထဲမှထံမှနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဝင်ပေါက်သူ့ဟာသူနေတဲ့ရေကန်ရဲ့ width ဖို့ဘာသာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဦးတည်ချက်ကနေထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်မြောင်းအတွင်းစီးဆင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကန်အကျယ် subtends တစ်ဦးဦးခေါင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ SAG တစ်ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကွေး၌တည်ရှိ၏လျှင်, SAG မှာဆင်ခြေလျှောခြင်းမရှိမြောင်းစွမ်းရည်ရှိကွောငျးကိုဆိုလိုတာလို့သုညဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်အတွက်ဝင်ပေါက်၏ drawdown အကျိုးသက်ရောက်မှုကနေရရှိလာတဲ့သုံးရှုထောင်စီးဆင်းမှုပုံစံရှိပါတယ်။ တစ်ခုအကြမ်းဖျင်းအဖြစ်, တဦးတည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ချဉ်းကပ်တန်းဂျတန်းများထဲမှတစ်ဝက်တစ် longitudinal ဆင်ခြေလျှောယူဆရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရေကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏အပျက်အစီးများဝန်အဘယ်သူမျှမကအခြားနေရာအရပ်သို့သွားနိုင်ပါတယ်သောကြောင့်, သင့်လျော်တဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်အဆိုပါဝင်ပေါက်အရွယ်အစားလျှောက်ထားရပါမည်။ sags အတွက်ဆန်ခါဝင်ပေါက်များအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ခုရှိ၏ ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်အဘို့, အချက်အတန်ငယ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာများတွင်တစ်ဆန်ခါဝင်ပေါက်အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏အချက်လုံခြုံရေးလျှော့ချရေးအချက်အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အချက်ပိတ်ဆို့နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်,2များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်တစ်ဝက်ဆန်ခါအပျက်အစီးများအားဖြင့်ပိတျဆို့နတေဲ့ကြောင်းယူဆထားတဲ့ 50% ၏ပိတ်ဆို့အချက်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ သိသာထင်ရှားသောကန်ထိုကဲ့သို့သောဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းနှင့် SAG-ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကွေးထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကိုဘယ်မှာ, ကောင်းမွန်သောအင်ဂျင်နီယာအလေ့အကျင့် SAG အတွက်ဝင်ပေါက်အပေါ်စီးဆင်းမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအချို့သို့မဟုတ်အများဆုံးသက်သာရာဖို့ SAG တည်နေရာဝင်ပေါက်၏တစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာ flanking ဝင်ပေါက်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအလယ်အလတ် / ဒီမြောင်းမြောင်း
မြောင်းသို့မဟုတ်ဝင်ပေါက် Add, မြောင်းခုနှစ်တွင်ပေါ်ထွန်းထိုပျမ်းမျှအများအားဖြင့်မှန်, ဆန်ခါ inlets ၎င်း, ဒါ့အပြင်ချေါနကွေ “Drop ဝင်ပေါက် ,. ” ဒီတိုးမြှင်-အားဖြင့်ဝင်ပေါက်၏အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအဆိုပါဝင်ပေါက်ခန့်အနက်တစ်ဦးကကွန်ကရစ်ပုံစံ Riprap ကော်လာ Type A Bowl သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုဝင်ပေါက်တစ်ဦးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် တဲ့မြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး SAG (sump) ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။ ဦးစီးဌာနသုတေသန (0-5823-1) တစ်ကွောငျးဖျောပွသ ခြောက်လလက်မမြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုစီးဆင်းမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောဖမ်းယူသေချာစေရန်လုံလောက်သောမဖြစ်မည်အကြောင်း, တစ်ဦးကြီး၏မြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဒီဇိုင်နာကတော့ဆုံးဖြတ်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ပြည့်စုံဖမ်းဘို့လိုအပ်နက်ရှိုင်း, ဒါမှမဟုတ်နောက်လာမည့်ဝင်ပေါက်ဖို့မြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုကျော်စီးဆင်းမှုများအတွက်အကောင့်။ စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကြောင်းသေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရမည် မြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုတောင်စောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဇုန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
ရေနုတ်မြောင်းဖွညျးညှငျးစှာ ရ လြှောဆငျး ခွငျး
ရေနုတ်မြောင်းဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးလည်း Over-ခြမ်းရေနုတ်မြောင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသို့မဟုတ် slot နှစ်ခုတားဆီးရန်, လေ့တစ်ဦးတံတားကုန်းပတ်ပေါ်ကိုအပြေးကနေစီးဆင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ပေါ်သို့တစ်ဦးတံတားကုန်းပတ်ကိုချွတ် running ထံမှစီးဆင်းမှုကိုတားဆီးဖို့တံတားများစွန်းမှာအသုံးပြုကြသည်။ တစ်ရေနုတ်မြောင်းဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးသို့မဟုတျထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖြတ်မျှမုန်တိုင်းရေနုတ်မြောင်းစနစ်အားပစ္စုပ္ပန်သည်နှင့်သင့်လျော်သော outfall ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်မြောင်းအပိုင်းနောက်ကွယ်မှလက်ဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိရှိရာကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ထံမှစီးဆင်းမှုကိုဖယ်ရှားအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်ရှိရာကအခြားနေရာများတွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင်, ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအတွက်ဖွင့်လှစ်သည့်တာတမံသို့မဟုတ်ဆင်ခြေလျှော၏တိုက်စားမှုကာကွယ်ပေးသည်သောအပေါ်ယံအခွံကိုယဉ်ချန်နယ်သို့မဟုတ်ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးကိုဆက်သွယ်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် channel ကိုသို့မဟုတ်ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးပုံ 10-8 အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ်လမျးခရီးတာတမံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပိုက်တွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ဒီကုသမှု mowing နှင့်အခြားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမိတ်ဆက်ပိတ်ဆို့ကနေကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
တည်နေရာ ,, ဝင်ပေါက်
သည့်အဆိုပါဝင်ပေါက်တည်နေရာလမျးခရီးဖြင့်ဖြစ်စေ Be နိုင်ပါစေ, နှစ်ဦးစလုံးသို့မဟုတ် Add, Hydraulic လိုအပ်ချက်များဒြပ်စင်ထနှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာ။ ဝင်ပေါက်လမျးခရီးဒြပ်စင်၏အထက်ထားရှိရပါမည် (Bypass လုပ်ရ Flow ဒီဇိုင်းချဉ်းကပ်ကြည့်ပါ) ထိုကဲ့သို့သော sags, လမ်းလမ်းဆုံ, သှေးထှကျသံယိုကျွန်းများ (ပုံ 10-9 ကိုကြည့်ပါ), စူပါမြင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှု, သည့်ကားလမ်း, Cross-လူတန်းစားပေါင်းစုံကဲ့သို့၎င်း, ရိုးတားဆီးရန်။ လမ်းဆုံ, ရိုးနှင့်မှဖြတ်ပြီးစီးဆင်း Cross-လူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းရိုးကိုဖြတ်ပြီးစီးဆင်းတဲ့လူကူးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနေစဉ်တစ်အသွားအလာအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်, ငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ, ခြံဝင်းသို့ဝင်။ ဤတည်နေရာမှာဝင်ပေါက်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပါမည် စီးဆင်းမှု၏ 100% ကိုဖမ်းယူ။ ဝင်ပေါက်ကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ဟိုက်ဒရောလစ်တည်ရှိရပါမည် အလွန်အကျွံမြောင်းစီးဆင်းမှုနှင့်အလွန်အကျွံကန်။
ယိုစီးမှုဝင်ပေါက်လမ်းနှင့်ယာဉ်ရပ်နားကနေရေကိုစုဆောင်း စာရေးကာမြေအောက်မုန်တိုင်းယိုစီးမှုစနစ်ကြောင့်သိရှိစေရန်။ တစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်မြောင်းထဲသို့ထည့်သွင်းဝင်ပေါက်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် စနစ်များကိုထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဝင်ပေါက်ဟုခေါ်ကြသည်။ ယိုစီးမှုဝင်ပေါက်တစ်ဦးတည်းအနည်းဆုံးရေအရည်အသွေးကိုအကျိုးကျေးဇူးရှိ ; သို့သော်တစ်ဦးတီထွင်ရေအတွက်သူတို့ဖြစ်ကြသည် မကြာခဏတစ်ခုလုံးအဖြစ်ရေအရည်အသွေးကိုအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်တဲ့ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၏တစ်ဦးလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်း။ ထည့်သွင်းနိုင်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်ရှိပါတယ် အချို့သောရေအရည်အသွေးကိုအကျိုးအတွက်အောင်မြင်ရန်တစ်ယိုစီးမှုဝင်ပေါက်သို့။
အဆိုပါဝင်ပေါက်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, ပလီကေးရှင်း သည့်ကြောကျခငျးလမျး, ကားရပ်ရန်အများကြီး, အခငျး Swales အတူသင့်တော်ရှိပါသလား, သို့မဟုတ်အခြားရော့ခ်-စီတန်းမြောင်းလောလောဆယ် Be သို့မဟုတ် Add ရန်စနစ်စီစဉ်ထား Installed နေအဘယ်မှာအမြဲတမ်းမုန်တိုင်း, ယိုစီးမှု, ထည့်ပါ။
ဝင်ပေါက်အားသာချက်များစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် လမ်းဘေးမြောင်းထဲကနေယုတျညံ့မျောပါခြင်းမှာရေဥတုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်စွမ်းအင်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြင့် culverts / မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးကနေဆင်းအလျင်ကိုလျှော့ချပါ။